Abafowunelwa abathembekileyo yinkqubo entsha kaGoogle yokhuseleko | Iindaba zeGajethi
Vumela abo basondeleyo kuwe bazi ukuba ulungile kubafowunelwa abathembekileyo bakaGoogle
Ukuba neGPS kwi-smartphone kuthetha ukuba ngawo onke amaxesha singayazi indawo ekuyo apho sizifumana sikwanakho nokuvumela naluphi na unxibelelwano esinalo, ngokusebenzisa iiapps ezinje ngeWhatsApp nangale ndlela yokwabelana ngendawo ukuze loo mhlobo afike kwindawo yethu.
Le geolocation yenye yezona mpawu zibalaseleyo zolunye usetyenziso olusungulwe nguGoogle olujolise ekwenzeni naluphi na unxibelelwano lwethu oluthembekileyo ingacela indawo esikuyo ngqo ukuba asiphenduli umnxeba wakho kwimizuzu emihlanu. Isicelo esikhethekileyo esibizwa ngokuba ngabaQhagamshelwa abathembekileyo, esasungulwa nguG omkhulu kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo.
Abafowunelwa abathembekileyo yinkqubo entsha kaGoogle, njengoko yayingu-Allo kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo, ekuvumela ukuba wabelane ngendawo okuyo nabahlobo bakho okanye usapho kuzo zonke ezo zinto iimeko ezingxamisekileyo zinokwenzeka, ezinje ngohambo lwendawo apho nabaphi na abo banxibelelana banokucela indawo yethu ngalo naliphi na ixesha.
Nje ukuba usetyenziso lufakwe, kufuneka nika iwonga "elithembekileyo" kubo nabaphi na abahlobo bakho kunye nosapho onalo kuluhlu lwakho lokunxibelelana. Baza kuba nakho ukubona imeko yakho ngelixa usandula ukuhambisa kwaye ukwi-Intanethi. Ukuba bacela indawo okuyo kwaye awukwazi ukuphendula ngexesha elifanelekileyo, indawo okuyo iya kwabiwa ngokuzenzekelayo kwaye izihlobo zakho ziya kuba nakho ukwenza isigqibo sokuba benze ntoni ukuza kuwe ngexeshana elifutshane okanye batsalele inombolo yefowuni engxamisekileyo.
Le app inikezelwe kwiimeko ezizodwa kwaye inokhuselo olukhulu ukuba ilungu losapho okanye umhlobo ufuna ukuba sibakhathalele. Uya kuba nenketho tshintsha abafowunelwa "abathembekileyo" okanye wabelane ngendawo yakho. Ewe, iapps ifuna ukwenziwa kweGPS ukuze isebenze ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Vumela abo basondeleyo kuwe bazi ukuba ulungile kubafowunelwa abathembekileyo bakaGoogle
Ukhuseleko alunakusala kwi-elektroniki. Kukuziphikisa kukodwa.
Ukuntywila kwikhompyuter sitsho
UDaft akabhekiseli ekushiyeni ukhuseleko ezandleni zombane. Imalunga NOKONGEZA imiqolo yokhuseleko.
Amanqanaba amaninzi, ngokuqinisekileyo, impumelelo engaphezulu.
Phendula Puto Informático
I-Surface Pro 4 ifumana uhlaziyo olutsha lwe-firmware
I-Galaxy S7 iya kuhlaziywa ngokuthe ngqo kwi-Android 7.1.1